Xog Cusub: Halkee ayuu ku danbeeyay safiirka Imaaraadka ee uu caydhiiyay Madaxweyne Farmaajo? – Xeernews24
Xog Cusub: Halkee ayuu ku danbeeyay safiirka Imaaraadka ee uu caydhiiyay Madaxweyne Farmaajo?
Waxaa weli Hakad ku jira howlaha Safaarada Imaaraadka Carabta ee magaalada Muqdisho, kadib markii uu tashwiish intiisa badan la xaliyay soo kala dhex galay Madaxweynaha Soomaalia Maxamed C/llahi Farmaajo iyo Dowlada Imaaraadka Carabta.
Tashwiishka iyo Hakadka howlaha Safaarada Imaaraadka Carabta ayaa waxaa sabab u noqday Danjiraha dalkaasi u fadhiya Soomaalia Maxamed Cusmaan Al-Xamaadi.
Dowlada Imaaraadka Carabta oo iminka ay isku soo dhawaadeen Madaxweynaha Soomaalia ayaa wada dadaal ay dib ugu soo celineyso Danjire Maxamed Cusmaan Al-Xamaadi, halka Dowlada Soomaalia la sheegay inay dal baneyso in Imaaraadka uu la imaado Danjire cusub oo aan ku xadgudbeynin umuuraha Soomaalia.
Dowlada Soomaalia ayaa sidoo kale Imaaraadka Carabta ku wargalisay in qorshaha lagu eryay Maxamed Cusmaan Al-Xamaadi uu qeyb ka yahay Siyaasada cusub ee Dowlada, balse wali ay Imaaraadka u furan tahay inay la imaado Safiir kale.
Dowlada Imaaraadka Carabta ayaa arrimaha Soomaalia uga maarmin Danjire Maxamed Cusmaan Al-Xamaadi oo dhawaan magaalada Muqdisho warqad Casuumaad ah ku gudoonsiiyay Madxaweynaha Soomaalia Maxamed C/llahi Farmaajo.
Maxamed Cusmaan Al-Xamaadi, ayaa wali si KMG ah uga sii howlgala magaalada Nairobi ee Xarunta dalka Kenya waxa uuna dhowrayaa go’aanka kasoo baxa Dowlada Soomaalia oo iyadu dalka ka erisay.
Maxamed Cusmaan Al-Xamaadi, ayaa mudadii ay shaqeyneysay Dowlada Xasan Sheekh Maxamuud saameyn ba’an ku dhex lahaa Siyaasada Soomaalia waxa ayna awoodiisa wiiqantay markii laga guuleystay Dowladii Xasan Sheekh oo garab ka heleysay Dowlada Imaaraadka Carabta.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/11/safiirka-imaaraadka-280x175.jpg 175 280 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-04-18 16:52:552017-04-18 16:52:55Xog Cusub: Halkee ayuu ku danbeeyay safiirka Imaaraadka ee uu caydhiiyay Madaxweyne Farmaajo?
Xog Muhiim ah:Villa Soomaalia oo baabi’ineysa caqabadihii uu Gabra kala dhex... Paul Kagameega Dalka Rwanda oo booqasho labo maalmood ah uga bilaabatay Jab...